कोको बोले त #JusticeForNirmala, भन्दै; किन बोल्दैनन कलाकारहरु ? - DURBAR TIMES
HomeUncategorizedकोको बोले त #JusticeForNirmala, भन्दै; किन बोल्दैनन कलाकारहरु ?
कोको बोले त #JusticeForNirmala, भन्दै; किन बोल्दैनन कलाकारहरु ?
नेपालमा आफूलाई पर्दा आFसु र अर्कालाई पर्दा मुख बन्द गरेर बस्ने सँस्कृति बढ्दै गएकाे छ ।धेरै भन्दा धरै केसहरूमा नाम चलेका व्यक्तिहरूले आफूलाई अन्याय पर्दा हारगुहार गर्ने र अर्कालाई पर्दा चुप लाग्ने गरेका उदाहरणहरू प्रशस्त देखिन्छन्। हामीले त्यस्तै नेपालकै चर्चित कारूणिक तथा हृदयविदारक एउटा केस , जुन घटना घटेकाे २ वर्षभन्दा बढी भैसकेकाे छ तर आजसम्म याे घटना निष्कर्षमा पुग्न सकेकाे छैन । याे घटनाकाे बारेमा ठूला भनाैँदा व्यक्तिहरू चुप लाग्नु पनि एउटा दुखद् कुरा रहेकाे छ । याे घटनामा काे काे बाेले अनि काे काे बाेलेनन् भनेर हामीले खाेज्ने प्रयास गरेका छाैँ ।
झापालिश इस् पछी धेरै कलाकारहरुले बल्ल #JusticeForNirmala भनेर लेखे, अनी बोले | झापालिश एक युटुब च्यानल हो जहाँ इश नाम राखेर मनिष पाण्डेले भिडियोहरु सार्वजनिक गर्छन। उनी हाल बिदेशमा छन्। बिदेश बाट नै कारमा बसेर सेल्फि स्टाईलमा भिडियो बनाउछन। उन्को भिडियोहरु आजकाल सामाजिक सन्जालमा भाईरल हुने गर्दछन। केही कडा असभ्य शब्द बोल्छन तर जब बोल्छन कडा तरिकाले प्रस्तुत हुन्छन। हालसालै चलेको नयाँ दु:ख लाग्दो ट्रेन्ड #JusticeForNirmala को बारेमा पनि उन्ले बोलेका थिए। भिडियोमा धेरैनै असभ्य तरिकाले जरुर उन्ले बोलेका थिए तर जति बोले शायद प्राय कलाकारको नजर अनी मनमा छाेयाे। कलाकारहरु निर्मला पन्तको बारेमा बोलेका थिएनन्। जब झापालिश को लाेप्पा कलाकारहरु लाई पर्यो तब बल्ला बोल्न थाले |
बिशाल गौतमको #hashtag नगर्दा हुन्छ
हालसालै बिशाल गौतमले पनि आफ्नो यूटुब च्यानलबाट यस्को टपिक निकाल्दै दुःखित तरिकाले हामी सबैको सदाबहार गलत नजर लाई बुझएका छन जस्ले आत्मा सछी राखेर सबैलाई आफ्नो गल्ती महसुस गर्ने भिडियो सार्वाजनिक गरेका छन।
नाजिर हुसेनको हृदयबिदारक फेसबूक बक्तव्य
नाजिर हुसेनले धेरै पिडादायी तरिकाले निर्मला पन्तको बारेमा बोलेका थिए। उन्ले सिधा न्यायालयको कमजाेर अनी लाजमा वास्तविकता दर्शाएका थिए। उन्ले भिडियोमा यस्तो भनेका थिए, ”एक समय अदालतमा अडर अडर भन्दै गाभल बजेको थियो; न्याय मूर्तिको हातमा झुन्डीएको बाङ्गो तराजुले सिधा न्याय गरेको थियो त? बाको मुटु चकनाचुर भएर फुटेको कस्ले देख्यो ? एक त्यान्द्रो आशा बोकेर ढोका देखि ढोकासम्म पुगेको बाको नाङ्गो पैतालालाई कस्ले देख्यो ? आमाको कोख रित्तिएको कस्ले देख्यो र यहाँ ? दोबाटो, चौबाटोमा छाती पिट्दै रोईरहेकी आमाको आँसुलाइ कस्ले पुछ्यो र यहाँ ? एउटा नौजवान युवतीको सपनाहरु भताभुङ्ग भएको कस्ले नै देख्यो र ? देख्नु भो त तपाईंले? तपाईंको न्याय मुर्तिले त देख्दैन तपाईंले के देख्नु हुन्छ हो हजुर म, म नै भएर त्यहीँ निर्मलाको कुरा गरिरहेको छु जस्को मृत शरीरबाट गन्हाउने बासी विर्य अझैपनि हाम्रो मस्तिष्कमा ताजै भएर डुङ्डुङ्ती गन्हाइरहेको छ के तपाईंलाई गन्हाएको छैन ? महासय, मुटुमा हात राखेर भन्नुस त ! तपाईंको अदालतमा न्याय मुर्तिको हातमा झुन्डीरहेको त्यो बाङ्गो तराजुले सिधा न्याय गर्यो त आजसम्म ?”
युनिक पोइटको गीत #JusticeForNirmalaPanta
युनिक पोइटले पनि #JusticeForNirmalaPanta भन्दै एउटा गीत सार्वजनिक गरेका छन। उन्ले पनि कसरी बलात्कार हुन्छ अनी कसरी भाइरल भईराख्या छ भन्दै मार्मिक शब्दमा बयान गरे। उन्को गीतको सुरुवातमा नै निर्मलाको स्टोरी प्रस्तुत गरेका छन।
साथै, श्रृंखला खतिवडा , बर्षा राउत , गायक प्रताप दास , प्रियंका कार्की, स्वस्तिमा खड्का लगायत अन्य कलाकारहरुले नि फेसबूक, इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरे।
त्यस्तै प्रचण्ड, ओली, बिद्या देवी भण्डारी देखी प्राय देशका नेताहरुको कमेन्ट बक्समा निर्मालाको लागि #JusticeForNirmalaPanta निक्लेका छन।
अझ पनि गोसिपका लागि हजार शब्द र हजार कमेन्टस् निक्लन्छन तर एक शब्द निर्मलाका लागि निक्लदैन कलाकारहरु बाट।
“न्याय नपाए गोर्खा जानु”
“न्याय नपाए गोर्खा जानु” भन्ने वाक्य केही दशक अघि सम्म नेपालको सम्मानित न्याय प्रणाली र न्यायिक प्रतिनिधिको सम्मानमा निक्लिने सकारत्मक वाक्य थियो। जुन आजको दिनमा देश अनी पूर्ण संस्था नै यसकाे लाज छाप्न पनि शिर निहुराएकाे जस्ताे देखिन्छ ।
एक वर्षभित्रमा मात्र विभिन्न घटनाहरूले काण्डकै रूप लिए । ७० कराेड काण्ड, ३३ किलो सुन काण्ड, पुलिस काण्ड, डि आइ जि काण्ड, विष्णु पौडेलको बालुवाटार काण्ड,काण्डै काण्ड चले ।जहाँ सबैले राष्ट्रिय शक्ति को चाहना अनुरुप सफाइ पाए। तर, निर्जन वनमा एक्लै रूने न्याउली चरीकाे राेदन जस्तै निर्मला हत्याकाण्डमा न्यायालय आँखा चिम्लेर बसिरह्याे। बारम्बार प्रहरी अनि सरकारी निकायले लज्जास्पद, तरिकाले आराेपित व्यक्ति सार्वजनिक गर्ने र बारम्बार रिपाेर्ट परिवर्तन गर्ने काम गरिरह्यो तर वास्तविकता लुकिरह्यो, या हुन सक्छ लुकाइयो।
निर्मला हत्याकाण्ड त सतहमा आएकाे एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हाे । उनिजस्तै धेरै सुनिएका कति नसुनिएका कहालीलाग्दा कहानीहरु सामाजिक सन्जालका भित्ताहरुमा सिमित छन्। हाल प्रधानमन्त्री देखी कलाकार तथा सम्पूर्ण ठुला ब्यक्तित्वहरुको सामाजिक भित्ताहरुमा #JusticeForNirmala सूचीकृत गरिएकाे छ ।
धेरैजसाे प्रहरी अधिकृतहरु यस वर्ष स्वयम हत्कडीको शिकार भए। मन्त्री देखी सभामुख जस्ता ठूला व्यक्तिहरूकाे पद नै धरापमा पर्याे । न्ययालयका प्रमुख हरु, स्वयम् प्रधानन्यायाधिस पनि काण्डका शिकार भएर जहाँ उनी भने कठघरामा उभिनुपर्ने देखिन्न तर उनका बारेमा प्रश्न साेधिँदा भने उभिनुनपर्ने भन्ने हुँदैन । सबै नेपालीले न्यायालय बिक्यो, नेता बिके, प्रहरी बिक्यो, प्रशासन बिक्यो भनेकाे सुन्न पाईन्छ। जनसमुदायको कुरा गलत सिद्ध गर्ने क्षमता भने कुनै पनि सरकारी निकय सँग छैन या उनीहरू याे चाहँदैनन्। दुई वर्ष बित्दा पनि निर्मला हत्याकाण्का पिडितलाई न्याय नदिने यो प्रशासनिक अनि न्यायिक संस्थाको अगाडि #JusticeForNirmala भन्नु ब्यर्थ छ। सम्पूर्ण जनता लाचार छन् ।
धेरै समय भएको छैन नेपालमा साम्राज्ञी , दिपाश्री, पूजा शर्मा का रोना धोनाका चर्चा चलिरहे। त्यो बेलामा सबै कलाकारहरु बोले। उनिहरु आँफै पनि अरुले आफ्नो तर्फबाट बोलेनन भन्ने भावनात्मक अपिल भने चलिरह्यो। तर शायद कलाकारहरु जति आफ्नाे लागि बाेले, त्यसरी निर्मलाको लागि बोले #JusticeForNirmalaPanta भन्ने बाेली सरकारको कान सम्म पुग्थ्यो की?
Previous articleपदाधिकारी नहुँदा विश्वविद्यालय सभा अन्यौल
Next articleहेटौडामा एक साताका लागि निषेधाज्ञा थप